မြစ်ကျိုးအင်း: ဘလောဂ်ဂါ အငြိမ့် (၃)
ဘလောဂ်ဂါ အငြိမ့် (၃)
ဘလော့ဂ်မဟာ ရုံတော်မင်္ဂလာကြီးအတွင်းတွင် ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်တို့ ပျားပန်းခတ်မျှ လှုပ်ရှားသွားလာကာ မိမိတို့ရဲ့ ဖျာနေရာများကို လက်မှတ်များကိုင်ဆောင်လျက် ရှာနေကြသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် မိမိတို့ရဲ့နေရာများတွေ ဝင်ထိုင်ကြနေသဖြင့် ဇာတ်ပွဲရုံထဲတွင် လှုပ်ရှားမှုတို့ အနည်းငယ် ငြိမ်သက်သွားပေမယ့် ဆူညံသံတို့ကတော့ ကျန်နေသေးသည်။
အငြိမ့်စင်ကို ကြက်သွေးရောင် ဖဲကတ္တီပါ လိုက်ကာကြီးဖြင့် ကာထားသည်။ အငြိမ့်စင်ရဲ့ ဘယ်ဘက် အခြမ်းတွင်တော့ မှန်စီရွှေချ ဆိုင်းဝိုင်းကြီး ခန့်ညားစွာ တည်ရှိနေသည်။ ဇာတ်ရုံ ဘယ်ညာနှစ်ဖက်ရဲ့ အပေါ်တွင် မီးဆလိုက်သမားတို့ အတွက် စင်နှစ်ခု ရှိနေသလို ထိုစင်နှစ်ဘက်ရဲ့ အောက်တွင်တော့ ဆောင်းဘောက်စ်တွေကို ချိတ်ဆွဲထားသည်။ အငြိမ့်စင်ရဲ့ နဖူးစည်းတွင်တော့ ရွှေရောင်ဖောင်းကြွ စာလုံးများဖြင့် "ဘလော့ဂါအငြိမ့်" ဟုစာတန်းထိုးထားသော ဆိုင်းဘုတ် တခုရှိနေသည်။
ထို့နောက် မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းကြီးမှ လက်ကွက်စမ်းသံ ထွက်ပေါ်လာချိန်တွင် ပွဲခင်းထဲမှ အသံတို့ မီးကိုရေဖြင့် ဖျန်းလိုက်သလို ငြိမ်သက်သွားတော့သည်။ မကြာခင် အများမျှော်လင့်နေကြသော ဘလော့ဂါ အငြိမ့် စတင်တော့ မည်မဟုတ်ပါလား။ ဆိုင်းပညာရှင် ဘလော့ဂါ(သေရွာပြန်)အိမ် ရဲ့ အပျိုးတီးဟန်ကို နားစွင့်ရင်း ကြက်သွေးရောင် ကန့်လန့်ကာ အဖွင့်ကို စိတ်စောစွာ မျှော်နေကြသည်။ မကြာခင် ဇာတ်ရုံအတွင်း ဘေးနှစ်ဘက်မှ မီးရောင်တို့ မှိတ်ကာ ပွဲခင်းတခုလုံး အမှောင်အတိ ကျသွားသည်။ စူးရှအားပြင်းသော ဆလိုက်မီးနှစ်ခုတို့သည် ကြက်သွေးရောင် ကန့်လန့်ကာ ပေါ်တွင် ရစ်ဝဲနေသည်။
မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းမှ အချီအချ တီးဟန်နှင့်အတူ ကြက်သွေးရောင် ကန့်လန်ကာကြီးမှာ ဘေးတဖက်စီသို့ ခွဲထွက် သွားသည်။ ဇာတ်စင်ပေါ်တွင် အဆင်သင့်ရှိနေသော အဖြူရောင် အင်္ကျီကိုယ်စီဝတ်ထားသော လူရွှင်တော် သုံးယောက်တို့ လက်အုပ်ချီလျက် ပရိတ်သတ်ကို အလေးအမြတ် ဂါရဝ ပြုလိုက်ကြသည်။ လူရွှင်တော်များမှ သံပြိုင်ညီညာစွာဖြင့် ....
"ပရိတ်သတ်ကြီး အားလုံးအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ဖြစ်ပါစေ" ဟုဆုတောင်းပေးလိုက်ကြသည်။
ထို့နောက် လူရွှင်တော် မိုးကုတ်သားမှ "နွမ်း....တာတွေလန်းကြစေဖို့ ....၊နွမ်းတာတွေ...လန်းကြစေဖို့ ၊ ပန်းမာလာလို နမ်းမဝစေဖို့ ( ကျနော်တို့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို) စမ်းသီတာရေ ဖျန်းပေးပါစို့"
မိုးမောင် ။.........။ "ကောင်းလိုက်တဲ့ ခွန်းထောက်ကလေးပါပဲ"
မိုးကုတ်သား။....။ "ကိုမိုးမောင်ရေ ကျန်းမာချမ်းသာပါရဲ့လားဗျာ"
မိုးမောင်။..........။ "ကျန်းမာပကတိ ချမ်းသာစွာ ရှိပါတယ်ဗျာ"
မိုးကုတ်သား။.....။ "ကိုလူထွေးကြီးရော ကျန်းခန့်သာလို့ မာပါစ"
ကိုလူထွေး။........။ "ရွှင်လန်းပီတိ ဂွမ်းဆီထိနှယ်ပါပဲဗျာ"
မိုးမောင် ။........။ "၂၀၁၀ ရဲ့ ပထမဆုံး အချိန်မှာ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ဖျော်ဖြေခွင့်ရတာ မင်္ဂလာတပါးပဲ မဟုတ်လားခင်မျာ"
မိုးကုတ်သား ။....။ "မှန်ပါပေတယ်ဗျာ အင်မတန်မှ မင်္ဂလာရှိပါတယ်"
ကိုလူထွေး ။.......။ "နှစ်သစ်ကို ရယ်မောခြင်းနဲ့ ဖွင့်လှစ်စေချင်တဲ့ ဇာတ်ဆရာရဲ့ စေတနာပါပဲ"
မိုးမောင်။......။ ၂၀၁၀ ရောက်ပြီဆိုတော့ ကိုလူထွေးက ဘာတွေလုပ်မယ် စိတ်ကူးထားလဲ
ကိုလူထွေး။.....။ "ငါကတော့ ၂၀၁၀ မှာ အလုပ်ကြီးတခုလုပ်ရမယ်"
"ဂွမ်း" ဈေးဦးဖောက် လင်ဗန်းဖြင့် အတီးခံလိုက်ရသည်။
မိုးမောင် ။......။ "ကိုလူထွေးရယ် နှစ်သစ်လေးကို စိတ်ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြတ်သန်းပါရစေဗျာ လောလောဆယ် မေ့ထားပါရစေအုံး "
မိုးကုတ်သား ။.....။ " ကဲပါလေ မထည့်မပြီး အဲ မပြောမပြီး မတီးမမြည် ဆိုသလို အများမျှော်နေကြတဲ့ မင်းသမီး လေးကို ခေါ်ထုတ်ကြရအောင်လားဗျာ"
ကိုလူထွေး။.....။ " ရှေ့ထွက်မင်းသမီးလေးက ဘယ်သူများပါလိမ့် "
မိုးကုတ်သား ။....။ " ဇာတ်ဆရာရဲ့ ညီမ မင်းသမီးလေး နှင်းဟေမာ ပါတဲ့ ကိုမိုးမောင်ကပဲ ခေါ်ထုတ်ပေးဗျာ"
မိုးမောင်။.....။ " အဟမ်း အဟမ်း ညချမ်းချိန်ခါ လသာသာ ...... အင်း..... (ခေါင်းကုတ်ကာ)
ကိုလူထွေး ။.....။ " မင်းသမီး ခေါ်ပါဆိုမှ သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ လာရွတ်ပြနေတယ်"
မိုးမောင် ။.......။ " ဆက်ဆိုရမှာ မေ့သွားလို့ဗျ ဟဲဟဲ ဒါဆို ကိုလူထွေးပဲ ခေါ်ပေးဗျာ "
ကိုလူထွေး ။........။ " လူတကာငေး မူယာလေးနဲ့ အပြော အဆို အငို အနွဲ့ စာဖွဲ့ရလောက်ပါတဲ့ တေးသံချိုသာ နှင်းဟေမာ လေးရေ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ဖျော်ဖြေလိုက်ကြပါစို့ "
ဇာတ်စင်ရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှ အဖြူရောင်ဝတ်စုံဖြင့် မင်းသမီး နှင်းဟေမာ ထွက်ပေါ်လာသည်။ထို့နောက် ပရိတ်သတ်ကြီးကို လက်အုပ်ချီ၍ " နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေရှင် " ဟု ဂါရဝပြု နှုတ်ဆက် လိုက်ပြီးနောက် လူရွှင်တော်များ ဘက်လှည့်ကာ
"မင်္ဂလာည ချမ်းပါ အကိုတို့ရေ" ဟု အပြုံးလေး ဖြင့် နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။
လူရွှင်တော်များမှ " မင်္ဂလာ ညချမ်းပါ ညီမလေးရေ " ဟု ပြန်လည်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
"ဟိုဘက်က အကို လူထွေးကြီးလားရှင်"
"ဟုတ်ပါတယ် ညီမလေးရေ "
"ဟိုတယောက်က ကိုမိုးမှောင် ကြီး မဟုတ်လားရှင် "
ကိုလူထွေး ။.....။ " အဲဒါ မိုးမှောင် မဟုတ်ဘူး ငတက်ပြား "
" ဂွမ်း " အငြိမ်မနေနိင်ဘဲ ဝင်ပြောသဖြင့် အတီးခံလိုက်ရသည်။
မိုးမောင် မှ မင်းသားကြီး ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း လေသံဖြင့်
" မိုး...မှောင် မဟုတ်ပါဘူးမင်းသမီး ၊ကျုပ်နာမည် မိုးမောင်ပါ။ ဒီမယ်....မင်းသမီး မင်းက အခြေသတင်းကြီးတဲ့ ရွှေမင်းသမီး ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ကျုပ်လို အညတရ ကိုမေ့သွားတာ မဆန်းပါဘူး မင်းအတွက်နဲ့ မိုးမောင် ဟိုးချောင်မှာ ပုဆိုးပြောင်ပြီး ...... အဲ ...အဲ .."
မိုးကုတ်သား မှ မိုးမောင်အနား ကပ်လာကာ " ရအောင်စပ် နော် မရရင် နာပြီသာမှတ် " ဟုကြိမ်းဝါးလိုက်သည်။
ကိုလူထွေးမှ ဆွမ်းကြီးလောင်းရန် အဆင်သင့် စောင့်နေသည်။
မိုးမောင်မှ ခေါင်းကုတ်ပြီး " ဟိုဟာလေဗျာ အဲ ... သူခိုး ရှောင်ခဲ့တာကို ပြောတာဗျ ...ဟင်းးးး "
ကိုလူထွေး ။......။ "သူခိုးကယ်သွားလို့ သက်သာ သွားတာနော် "နှင်းဟေမာ ။....။ " ကိုမိုးမောင် ကြီးနော် ပေါက်ကရ မပြောနဲ့ ဟိုးဘက်က ကိုမိုးကုတ်သား လားရှင်"
မိုးကုတ်သား။.....။" အော် နှင်းဟေမာ မင်းကတော့ အပျင်းပြေစရာဆိုပြီး နှလုံးသားကို နင်းခြေကာ ထွက်သွားခဲ့တာပဲ ခုတော့ ကိုယ့်နှလုံးသားမှာ ကင်းခြေရာတွေနဲ့ပါ နှင်းဟေမာ ရယ် "
မိုးမောင်။.....။ " အလဲ့ ပိုင်တယ်ကွာ... လိပ်ခေါင်း "
" ဂွမ်း " မိုးကုတ်သားမှ မိုးမောင်ကို လင်ဗန်းဖြင့်တီးက " နင့်ဂျီတော့ လိပ်ခေါင်းပါလား "
ကိုလူထွေး ။......။ " ဂျီတော့ မဟုတ်ပါဘူး ကြီးတော် ပါကွ "
နှင်းဟေမာ ။......။ " တော်ကြပါတော့ရှင် မင်းသမီး ကချင်လှပါပြီ "
မိုးကုတ်သား ။.....။ " ကဲ အပြောင်အပျက်လေးတွေ လျော့ပြီး အလုပ်လေးနဲ့ သက်သေပြကြရအောင်လားဗျာ "
လူရွှင်တော် သုံးယောက် အနောက်ဆုတ်သွားကြသည်။ ဇာတ်စင်ပေါ်ရှိ ပြာလဲ့သော မီးရောင်တို့သည် မင်းသမီးရဲ့ အဖြူရောင်အင်္ကျီကို လင်းလက်နေစေသည်။ ဇာတ်ရုံရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှ ရွာစားကြီး သေရွာပြန် အိမ် ရဲ့ ငြိမ့်ညောင်းသာယာသော ဆိုင်းသံထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် မင်းသမီးရဲ့ သာယာသောအသံဖြင့် တေးသီချင်း သီဆိုသံထွက်ပေါ်လာ သည်။
"သွယ်လျှပျော့ပြောင်း ဖော့ဖယောင်းသဏ္ဍာန် .. ကကြိုး... ကဟန် ..မူဟန် ..သွဲ့သွဲ့ လှပတင့်တယ် ချစ်စဖွယ် မြန်မာ့ရိုးရာ .... တစ်မျိုး တစ်ဘာသာ မရိုး နိုင်ပါ ဒို့မြန်မာ ဒို့ဓလေ့ ရင်ဝယ် တသိမ့်သိမ့် "လူရွှင်တော်များ ။.....၊ " အငြိမ့် ... "
မင်းသမီး ။ "အငြိမ့်သဘင်မဟာ ပန်းချီ ပန်းပု ထုဆစ် အလင်္ကာ ဘလော့ဂ် များရဲ့ အငြိမ့်တော် မင်္ဂလာ
သာယာ ထူးဆင့် ကမ်းလင့်...လို့ကြို ထာဝရ အစဉ်သာ မညှိုး ..... ပြည်သူ့ရင်မှာ ပိုတိုး... ချစ်မဲ့
သမီးလှလှလေး ... နှင်းဟေမာ သမီး ပျို ...... မြန်မာရိုးရာ........... အစဉ်လာ..မပြတ် မုဒြာအကနဲ့
ကန်တော့ပန်း ဆင်နေ ....မှာ.... "
ပျော့ပြောင်းသောဟန်ပန်ဖြင့် လက်အချိုးအဆစ်တို့ လှုပ်ရှားမှုသည် ဆိုင်းချက်အညီ တိခနဲ ရပ်ဆိုင်းပြီးနောက် ပွဲကြည့်ပရိတ်သတ်တို့ရဲ့ လက်ခုပ်သြဘာသံ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ပရိတ်သတ်ကို လက်အုပ်ချီ ဂါရဝ ပြုကာ မင်းသမီးလေး နှင်းဟေမာ ဇာတ်စင်နောက်သို့ ဝင်သွားသည်။ ဇာတ်စင်ထောင့်တွင် ရှိနေသော လူရွှင်တော် တို့အသီးသီး ထလာကာ ဇာတ်ခုံအလယ်တွင် စုရုံးလိုက်ကြသည်။
မိုးကုတ်သား ။......။ " မင်းသမီးလေး ကသွားတာ တယ်လည်း အချိုးကျ လှပါ ပါတယ်ဗျာ"
ကိုလူထွေး။..........။ " ဆိုသွားတဲ့ သီချင်းလေးကလည်း မကောင်းဘူးလားဗျ "
မိုးမောင် ။...........။ " အဆိုလေးရော အကလေးရော အတီးလေးရော အားလုံး သေသေသပ်သပ်ပါပဲဗျာ "
မိုးကုတ်သား။........။ "မင်းသမီးလေးရဲ့ အလှည့်ပြီးသွားပြန်တော့ ကျနော်တို့ လူရွှင်တော်တွေ အလှည့်ရောက် လာပြန်ပြီပေါ့"
မိုးမောင်။......။ " မှန်ပါပေတယ်ဗျာ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ရယ်မောပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ရမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တာဝန်ပဲ မဟုတ်လား"
ကိုလူထွေး။......။“ဒါဆို ဒီတခါ ဘာပျက်ရင်ကောင်းမလဲ ကမိုးမောင် ”
မိုးမောင်။.........။ “ဒီတခါ ငယ်မူပြန် ကြည့်ကြရအောင်လားဗျာ”
မိုးမောင်။........။ “ အာ....မဟုတ်ဘူးလေကွာ ငါပြောတာ ငယ်ငယ်က အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေ အကြောင်း ပြောကြမလားလို့”
ကိုလူထွေး။.....။“ ကောင်းတယ်ကွ အဲဒါ မိုက်တယ် ရှယ်ပဲ ”
မိုးကုတ်သား။.......။“ဒီလူကြီးနော် အချစ်အကြောင်းဆို မြူးနေတာပဲ”
ကိုလူထွေး။.....။“ငါက အသဲနုနုလေးကွ နုဆို ငယ်ငယ်က အသဲဟတ်တတ်ကွဲခဲ့တဲ့ အရာလေးတောင် ရှိသေးတယ် ဒီမှာကြည့်”
မိုးမောင်။......။ “ဟေ့လူ မညစ်ပါတ်နဲ့နော်”
မိုးကုတ်သား။.......။ “ကဲကဲ ပျက်လုံးကနေ ဈေးစကားပြောတဲ့အဆင့် ရောက်ကုန်တော့မယ် မိုးမောင် ခင်များပဲ စပြောဗျာ”
မိုးမောင်မှ ခပ်ဝေးဝေးကို ဆွေးဆွေးမြည့်မြည့် ကြည်ကာ
“ငါတို့ လူရွှင်တော် ဆိုတာလည်း အသဲနဲ့ပဲကွ ..။ဒီတော့ အချစ်ဆိုတာရှိခဲ့ကြတယ်။ ကံအကြောင်းမလှတော့ လွဲခဲ့ဖူးတာပေါ့ကွာ”
မိုးကုတ်သား ။.....။ “အမ်မယ် ဒါဆို ဂျိုရာလေးနဲ့ပေါ့ မှန်း ဟိုဘက်လှည့်စမ်း”
မိုးမောင် ။.......။ “ဘာကွ ငါ ဖီး အပြည့်နဲ့ပြောနေတာနော် ဖီးအပြည့်နဲ့”
ကိုလူထွေး ။......။ “မင်းဖီးကြီးကလည်း တံတွေးစင်တယ်ကွ ကဲပါ ဆက်ပြောပါအုံး”
မိုးမောင် ။........။ “ ငါလေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ချစ်သူ တယောက်ရခဲ့တယ်ကွ ငါသိပ်ချစ်တာကို သူကအဓိပ္ပါယ် ကောက်လွဲပြီး နောက်ဆုံးတော့ ဝေး သွားကြတာပဲကွာ”
ကိုလူထွေး ။......။ "ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲကွာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ "
မိုးမောင် ။.......။ “တနေ့တော့ဗျာ သူနဲ့ ကျနော် စကားတွေ ပြောနေရင်းနဲ့ ကျနော်သူ့ကို တွေ့ချင်တဲ့ အကြောင်းပြောတာပေါ့ ကိုယ်တို့ဘယ်တော့တွေ့ရမလဲ ကိုယ် အချစ်ကို အရမ်းတွေ့ချင်နေပြီ လို့ ပြောလိုက်တော့လေ သူက ဘာပြန်ပြောတယ်ထင်လဲ မကြာခင်တွေ့ရမှာပေါ့ ဆိုပြီး တိုးတိုးလေး ရယ်တယ်ဗျ အဲဒီရယ်သံကြားတော့ ကျနော် သူ့ကို ချစ်စိတ်တွေ အရမ်းဖြစ်သွားရတယ်ဗျာ အဲဒါနဲ့ ကျနော် က အရှိန်နဲ့ ဆက်ပြောဖြစ်တယ် ကိုယ်လေအချစ်ကိုတွေ့ရင် အရမ်း ဖက်ထားမိမယ်ထင်တယ် အခုတောင် ဖက်ထားချင်နေပြီ အချစ်ရယ်လို့ ပြောတော့ သူက ဒါဆိုလည်း အခုလောလောဆယ် အချစ်ကိုယ်စား ခေါင်းအုံးလေးပဲ ဖက်ထားပါတဲ့ ပြန်ပြောတယ်ဗျ”
မိုးကုတ်သား ။........။ “ အလဲ့ အလဲ့ ရှယ်ပဲဟေ့ ”
ကိုလူထွေး ။.......။ “ ဒါဆို အခြေအနေကောင်းတာပဲကွ ဘာကြောင့် ကွဲသွားရသတုန်း ”
မိုးမောင် ။.........။ “ဆက်ပြောပြမယ်လေ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ခေါင်းအုံးလေးကို သူ့ အမှတ်နဲ့ ဖက်ထားတာပေါ့ဗျာ ရင်ထဲမှာလည်း အချစ်စိတ်တွေ တားမနိင် ဆီးမရပေါ့ နောက်ဆုံး မနေနိင်တာနဲ့ သူ့ကို ပြောလိုက်မိတယ် "
ကိုလူထွေး ။......။ “ ဘာ ..ဘာ ပြောလိုက်တာလဲ ဟင် .... ဂလု”
မိုးမောင် ။.........။“ အချစ်ရေ ကိုယ်လေ အချစ် အမှတ်နဲ့ ခေါင်းအုံးလေးကို ဖက်ထားတာ အခု ကိုယ် စိတ်မထိန်းနိင်လို့ ခေါင်းအုံးစွပ်လေး ချွတ် လိုက်မိပြီလို့ ပြောလိုက်တာ တခါတည်း block ပါ လုပ်သွားရော”
မိုးကုတ်သားမှ မိုးမောင် ခေါင်းကို လင်ဗန်းဖြင့်ရိုက်ကာ
" အဲဒါ ဖျာရောင်းမှု အဲလေ ဖျားယောင်းသွေးဆောင်မှုကွ ဘာမှတ်လဲ "
မိုးမောင် ။.......။ “ မဟုတ်ဘူးလေကွာ ငါက ခေါင်းအုံးလေး ..... ”
ကိုလူထွေး ။......။ “ တော်တော် ..ဘာခေါင်းအုံးလေးလည်း မင့်အကြံ ငါသိတယ် ”
မိုးကုတ်သား ။......။ “ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမတွေ မကောင်းဘူးဗျ ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေ့ပဲ ”
ကိုလူထွေး ။.......။ “ မကောင်းတဲ့သူ မကောင်းပေမယ့် တကယ်ချစ်တဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ်ကွ ငါ့မိဘတွေဆို တယောက်နဲ့ တယောက် သိပ်ချစ်ကြတာ ဘယ်လောက်ချစ်သလဲဆို ငါ့ငယ်နာမည်က သူတို့ရဲ့ ချစ်သက်သေပဲ”
မိုးမောင် ။.......။ “ အဆန်းပါလားဗျ ရှင်းပြပါအုံး ”
ကိုလူထွေး ။.......။ “တကယ်တော့ ငါငယ်နာမည်က ခင်မောင်အုံး ကွ ကိုကိုခင်မောင်ထွေး မဟုတ်ဘူး ခင်မောင်အုံး ဆိုတဲ့ နာမည်မှာ ရာဇဝင်ရှိတယ်။ အဖေနဲ့အမေက မိဘတွေ သဘောမတူတော့ ခိုးပြေးကြတာပေါ့ အဲဒါ သူတို့ တည်းရတဲ့ အိမ်မှာ သူတို့ အတွက် ခေါင်းအုံးက တလုံးပဲ ရှိတာတဲ့ ။တယောက်နဲ့တယောက် သိပ်ချစ်ကြတော့ ညအိပ်ပြီဆို အဲဒီ ခေါင်းအုံးလေးကို ခင်အုံးပါ မောင်အုံးပါနဲ့ တယောက်ကိုတယောက် ငဲ့ညှာကြတာ ငါ့ကိုမွေးတဲ့ အထိပဲ ဒါနဲ့ ငါ့ကိုမွေးတော့ အမှတ်တရ အဖြစ် ခင်မောင်အုံး လို့မှည့်တာကွ ကဲကြည့်ဘယ်လောက်ထိ ချစ်ကြလဲ”
မိုးကုတ်သား ။.......။ “ တကယ်များလားလို့ ပေါက်ကရ ပြောတာကိုးဗျ ကျွန်တော်အသဲကွဲတဲ့ အကြောင်း ပြောပြ မယ်ဗျ တကယ်တော့ မိန်းမတွေ သစ္စာမရှိကြဘူး ကျွန်တော်လည်း သစ္စာအဖောက် ခံရတာပါပဲ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ကောင်မလေးကို သိပ်ချစ်တာဗျ သူနဲ့ပါတ်သတ်ရင် သဝန်လည်း အရမ်းတိုတတ်တယ် သူ့ကို အတန်တန်မှာတယ် ငါ့အပေါ် သစ္စာရှိပါလို့ အတန်တန် မှာထားရက်နဲ့ လုပ်ရက်တယ်ကွာ”
မိုးမောင် ။......။ “ နောက်တယောက်နဲ့ တွဲလို့လားကွာ ”
မိုးကုတ်သား ။.......။ “ နောက်တယောက်နဲ့ တွဲတာထက်ဆိုးတယ်ကွ တနေ့တော့ ငါသူ့ကို လွမ်းတာနဲ့ ဖုန်းခေါ် ဖြစ်တယ် သူနဲ့ စကားပြောရင်း သူကဗိုက်အောင့်နေတယ်လို့ ပြောတယ်ကွ ဒါနဲ့ ငါက ဘာတွေ အစားမှားမိလို့လည်း မေးတာပေါ့ သူက အချဉ်တွေ စားမိတယ်တဲ့လေ သူစားတဲ့ ဟာကို ကြားလည်းကြားရော ဒါ ငါ့ကို သစ္စာဖောက်တာပဲ တွေးမိတာနဲ့ ငါအသားတဆတ်ဆတ်တုန်ပြီး ဖုန်းချပြစ်လိုက်တာ ဒီနေ့အထိ ပြန်မခေါ်ဖြစ်တော့ဘူး”
ကိုလူထွေး ။.......။ “ သူက ဘာစားလို့လဲကွ ”
မိုးကုတ်သား ။.......။ “ ဂွေး သီး ”
မိုးကုတ်သားရဲ့ ခေါင်းပေါ်ကို လင်ဗန်းနှစ်ချပ်လုံး ကျရောက်လာတော့သည်။
ကိုလူထွေး ။........။ " ဂွေးသီးဆိုလို့ ငါ့အဒေါ် အပျိုကြီးတွေ ခေါ်ပုံ ပြောပြရအုံးမယ် သူတို့က အပျိုကြီးတွေ ဆိုတော့ ခေါ်ရမှာ ရှက်တယ်နဲ့တူတယ် ဒီတော့ သူတို့ဘာသာ ဘိုဆန်ဆန် နာမည်ပြောင်းထား လိုက်ကြတယ် "
မိုးမောင် ။........။ " ဘာနာမည်လဲ "
ကိုလူထွေး ။.......။ " lady' dream တဲ့လေ"
" ဂွမ်းးးး" ကိုလူထွေးခေါင်းကို ဝိုင်းတီးကြကုန်တော့သည်။
ကိုလူထွေး ။......။ "ကဲ..ကဲ... ဟိုမှာ မင်းသမီးက ကချင်လို့ ပြူတစ်ပြူတစ် လုပ်နေတယ်ကွ မင်းသမီးကိုလည်း အလှည့်ပေးကြပါစို့ "
မိုးကုတ်သား ။.......။ " ဒီတခါ အလှည့်ကျတဲ့ မင်းသမီး နာမည်ကဘူလေးလဲ "
မိုးမောင် ။.......။ " မင်းသမီးလေး ကြည်ဖြူပိုင် ပါတဲ့ဗျာ "
ကိုလူထွေး ။.......။ " မင်းတို့ခေါ်ခိုင်းရင်လည်း ပေါက်ကရ ဖြစ်အုံးမှာပါပဲ ငါ့ဘာသာခေါ်တာပဲ ကောင်းပါတယ်"
မိုးမောင် ။.......။ " ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိတာ ကောင်းတယ်ဗျ "
ကိုလူထွေး ။.......။ " ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့ အမြင်အတွေ့မှာ အဆင်မမေ့ရလေအောင် ဘဝင်ခွေ့စေမယ့် ကြည်ဖြူပိုင် ချောနှမလေး........ရေ "
လူရွှင်တော် ကိုလူထွေးရဲ့ ခေါ်သံအဆုံးတွင် ကြည်ပြာရောင် ဝတ်စုံဖြင့် မင်းသမီးလေး ကြည်ဖြူပိုင် ဇာတ်စင် ဘယ်ဘက်မှ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် ပရိတ်သတ်ကို လက်အုပ်ချီကာ "ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ" ဟုဆုတောင်းပေးလိုက်သည်။
မင်းသမီး ။......။ "အကိုကြီး ကိုလူထွေး နေကောင်းလားရှင့်"
ကိုလူထွေးမှ မသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ တခြားတဖက်ကို လှည့်နေလိုက်သည်။
မိုးမောင် ။......။ "အမ်မယ် အမ်မယ် ဒီလူကြီးက အထာကိုင်နေတယ်ဗျ "
မိုးကုတ်သား ။.....။ " ဘာမှ မဟုတ်ဘူး မင်းသမီးခေါ်နေမှန်းသိလို့ မတောင်ချင်ယောင်စိ နေတာ "
"ဂွမ်းးး" မိုးကုတ်သား ခေါင်းကို အတီးခံလိုက်ရသည်။
မိုးကုတ်သားမှ ခေါင်းလေးပွတ်ကာ "
မဟုတ်ဘူးလေကွာ မတောင်ချင်ယောင်စိ ဆိုတာ မသိချင်ယောင်ဆောင် တာလေကွာ လူရွှင်တော် လုပ်နေပြီး စကားလိန်လေးတောင် မရဘူး "
မင်းသမီး ။.....။ " ကိုလူထွေးကြီး ညီမလေး ခေါ်နေတယ်နော် "
ကိုလူထွေး ။......။ " ဘာအခုမှ အကိုကြီးလဲ "
မင်းသမီး။....။ " အယ် ... ကိုလူထွေးကြီး ဘာဖြစ်နေတာလဲ "
မိုးမောင် ။....။ " ကိုလူထွေးကြီး စိတ်မကြည်ဘူး ဖြစ်နေတယ် ဒါကလဆန်းတိုင်းဖြစ်နေကြလေ "
ကိုလူထွေး ။.....။ " ဘာကွ "
မိုးကုတ်သား ။.....။ " Max "
ကိုလူထွေး ။.......။ " ဟင်းးး "
မိုးမောင် ။......။ " လဆန်းရောက်ပေမယ့် လခ မထွက်လာသေးလို့ စိတ်မကြည်တာ ပြောတာပါဗျ"
ကိုလူထွေး ။......။ " လခ ကယ်သွားလို့ပေါ့ကွာ"
မင်းသမီး ။......။ " ကိုမိုးကုတ်သား ကြီးရော နေကောင်းပါစရှင်"
မိုးကုတ်သား ။......။ "အော် ခုတော့ ကိုမိုးကုတ်သားကြီးတဲ့လား ကြည်ဖြူပိုင်... ဟိုတချိန်ကတော့ မင်းပဲ ချစ်လှပါချည်ရဲ့ဆို မိုးကုတ်သားကိုသာ ကြိုးတုတ်ထားလို့ ရချင်ရမယ် ငါ့နှလုံးသားမှာတော့ မင်းကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ ဒီဘဝဆုံးတဲ့အထိ အရိုးထုတ်သွားမှာပဲ ငါတို့နှစ်ယောက် ငယ်စဉ်က အိုးပုတ်ကစား ပြီး လူကြီးတွေ အလစ်မှာ ......အဲ...အဲ..."
ကိုလူထွေး ။......။ "ဘာ ...ဘာ လဲဟင် "
မိုးမောင် ။......။ " ကာရံမိအောင် ဘယ်လို စပ်မလဲ တွေ့ကြသေးတာပေါ့ ကွာ "
မိုးကုတ်သား ။......။ " လူကြီးတွေ အလစ်မှာ နင် ပုဆိုးရုတ် သွား တာလေ "
" ဂွမ်းးး " မိုးကုတ်သားကို မိုးမောင်မှ လင်ဗန်းဖြင့်တီးချလိုက်သည်။
ကိုလူထွေး ။......။ " ပုဆိုးဝင်ကယ်သွားလို့ပေါ့ကွာ မဟုတ်ရင် ငါထင်တာ မှန်လောက်တယ် "
မင်းသမီး ။......။ " ဟိုးဘက်က ကိုမိုးမောင် မဟုတ်လားရှင် "
မိုးကုတ်သား ။......။ " မင်းကိုမေးနေတာကွ မိုးမောင်ရ "
မိုးမောင် ။.......။ " ငါကတော့ ရိုးရိုးတန်းတန်း ပြန်မဖြေချင်ဘူးကွ တကယ့်လူရွှင်တော်တွေ မြို့နာမည်တွေနဲ့ ကာရံမိအောင် ပြန်ထူးတာမျိုး ဖြေပြမယ် ဥပမာကွာ ရန်ကုန်မှာ ပြန်ဆုံ မယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ "
မိုးကုတ်သား ။.....။ " ဒါဆို ဘယ်လိုဖြေမှာလဲ "
မိုးမောင်။.......။ " ငါတို့က ဘလော့ဂါတွေဆိုတော့ ဘလော့နာမည်တွေ နဲ့ ဖြေပြမယ် ကဲမင်းသမီး ပြန်မေး "
မင်းသမီး။....။ " ဟိုးဘက်က ကိုမိုးမောင် လားရှင် "
မိုးမောင်။.....။ "မင်းသမီးရေ ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်က ခင်ဦးမေမှာ မြင်ဖူးနေ ခဲ့ပေမယ့် ဏီလင်းညိုမှာ အကြည်ချင်း ပိုခဲ့ကြတယ်လေ စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက် လို မအိပ်ဘူးလေဒီမနက် အထိ နေမယ် ပြောခဲ့ပေမယ့် ဧရာဝတီသားမှာ သေပါပြီတအား အော်ခဲ့တယ် "
ကိုလူထွေး။......။ " ဘာသွားလုပ်လိုက်တာလဲ "
မိုးမောင်။......။ " ခြေထောက် တက်နင်းမိတာ "
" ဂွမ်းးး " မိုးကုတ်သားမှ ဝင်ဆော် လိုက်သည်။
မိုးမောင်။.......။ " စတွေ့ကာစမှာ ဒီကိုလာလို အပီချိုသာတဲ့ အသံလေးနဲ့ ဖမ်းစားလွန်းလို့ ရီနိုးမာန် မှာ အပီခိုးနမ်း ချင်ခဲ့ပါတယ် ဒဏ္ဍာရီ လို မှန်တာအတည်ပြောရရင် ညရဲ့ကောင်းကင်လို ငါနဲ့ပေါင်းရင် မော်စကွီတိုလို အဖော်မညီမှာသေချာလို့ နှင်းနဲ့မာယာ လို မင်းနဲ့ငါဟာ နွေဦးမိုးလို ရေဗူးဖိုးတောင် တတ်နိင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး "
ကိုလူထွေး ။......။ " မိတယ်ကွာ ထမိန်ရုတ်မှုနဲ့ "
မိုးမောင် ။.........။ " မြစ်ကျိုးအင်းမှာ အဖြစ်ဆိုးခြင်းတွေပဲ တွေ့တာတောင် မြတ်မွန်မှာ ရက်လွန်အောင် ပျော်ခဲ့ကြတယ်လေ ဒါတွေက ပြန်တွေးကြည့်ရင် ဆောင်ယွန်းလလို ဟောင်းလွန်းလှ ပါတယ်ကွာ တကယ်တော့ ပန်းရနံ့ လို အငမ်းမတတ်ခဲ့လို့ ရေတမာ မှာ ဝေဒနာပေးခဲ့တာ မဆုမွန်မှာ ဘဝတခု လွန်ခဲ့ပါပြီ ဖြူစင်ကြယ်လို ငါလူတွင်ကျယ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး အဖြူလေးမှာ အလှူပေးမယ်ဆိုလို့ ဝသန်မိုးမှာ အမှန်.....အဲ.... "
ကိုလူထွေးနှင့် မိုးကုတ်သား လင်ဗန်း ကိုယ်စီကိုင်ကာ မိုးမောင်ကို ဗျင်းရန် အနားကပ်လာကြသည်။ မိုးမောင်မှ လက်ကာ ပြကာ
" နေပါအုံးဗျ ရေငတ်လို့ ရပ်လိုက်တာပါ ကဲဆက်ပြောမယ် ၊ ဝသန်မိုးမှာ အမှန်ခိုးပါမယ် ပြောခဲ့တာတောင် ချစ်ပါးလုံးလို မင်းကအသစ်ထားအုံးမလို့လား ဒါတွေကမင်းအတွက် ကောင်းကင်ပြာလို ဟောင်းချင်နေတာ ငါသိပေမယ့် ကိုရင်နော်လို ဟိုအရင်ခေါ်သံလေး ငါကြားသွားပါရစေအုံး "
မိုးကုတ်သား ။......။ " ကြိတ်ထား ကိုယ့်လူရေ ဘုရားဖူးတွေ လာနေတယ် "
မိုးမောင် ။.......။ " ဂျာမုန်းဒန်းမှာ အသာကုန်းနမ်း မလို့ကြံရွယ်ခဲ့ပေမယ့် မယ်ကိုးလို တကယ်ဆိုးပြီး ခြေလှမ်းသစ်လို အသေကြမ်းပြစ် ခဲ့မိတာ မေဓါဝီလို သေပါပြီ လို့ မင်းအော်ခဲ့သေးတယ် မဟုတ်လား
"ကိုလူထွေး ။........။ " ဘာသွား လုပ်လိုက်တာလဲ "
မိုးမောင် ။.........။ " ခြေထောက်တက်နင်းမိတာ ဗျ "
" ဂွမ်းးးး " မိုးမောင်ခေါင်းကို ဝိုင်းတီးလိုက်ကြသည်။
မိုးကုတ်သား ။.......။ " အလကားနေ ခြေထောက်ပဲ တက်နင်းနေတယ် နဲနဲပါးပါး အပေါ်တက်အုံး "
မိုးမောင် ။......။ မင်းနဲ့ငါဟာ သဘောထားတွေ မတိုက်ဆိုင်လို့ နွေးနေခြည် လို ဝေးလေပြီ ဖြစ်ခဲ့ရပေမယ့် ဒါတွေကို ခဏခဏ ပြောနေရင် အိုက်ခီလောက် လို ထိုင်အီးပေါက် နေတယ် ထင်မလား ၊ ခုတော့လည်း မင်းစိတ်နဲ့ငါ မိုးစက်အိမ်လို အရိုးထက် ပိန်နေရပါပြီကွာ ငါလည်းမကြာတော့ပါဘူး တလနွန် လို ငါလေ...ငါ တမလွန် အထိ မင်းကိုဆက် ....ချစ်....သွား....မှာ.....ပါ "
မိုးကုတ်သား ။.......။ " ပိုင်တယ်ကွာ လိပ်ခေါင်း "
ကိုလူထွေး ။.......။ " ပြီး ပြီ လား "
မိုးမောင် ။........။ " တော်ပြီဗျ ဘလော့ဂ်ကုန်အောင် ပြောရရင် မင်းသမီး ဒီညကလို့ မရမှာ စိုးလို့ ရပ်လိုက် ရတာဗျ "
မင်းသမီး ။........။ " ကျေးဇူးကြီးလှပါရဲ့ရှင် ဒီမှာလည်း ကချင်လှပါပြီ "
မိုးကုတ်သား ။........။ " ဒါဆို မင်းသမီးက ဘာသီချင်းလေးနဲ့ ဖျော်ဖြေမယ် စိတ်ကူးထားလဲ "
မင်းသမီး ။.......။ " သမီးတို့ ကျောင်းသူဘဝက အမှတ်တရလေးကို သီချင်းအဖြစ် ဆိုပြပါမယ်ရှင် သီချင်းရဲ့ မူရင်းနာမည်က 'ချစ်သူ့မျက်နာ' ပါ အခုသမီးဆိုမယ့် နာမည်က 'အကြွေးဆပ်မှာ' ပါတဲ့ရှင်"
လူရွှင်တော်များ မှ သံပြိုင်ဖြင့် " ကြားပါရစေဗျာ "
လင်းထိန်နေသော မီးတို့ မှေးမှိန်ကာ မင်းသမီး ကြည်ဖြူပိုင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင် ဆလိုက်မီး နှစ်ခု ပြေးလွှားနေသည်။ ဆိုင်းသံရဲ့ အပျိုး တီးလုံး ထွက်လာပြီးနောက် မင်းသမီးရဲ့ အချိုးညီညီ အကအလှတို့ စတင်လေပြီ။
"ငါ အကြွေးများနဲ့ချာချာလည်၊ ဖဲဝိုင်းတဝိုင်းရဲ့အဆုံးမှာ လူကဲခတ်မတတ်တဲ့ ငတုံးလို့
ငါ့ကိုငါ အပြစ်တင်မိတယ် ပြောင်းလဲမှုက မြန်ဆန်တော့ ဖဲရှုံးသွားလည်း ကစားလို့ ငါမပြီးသေးချင်၊
တကယ်လို့ နောက်တခါ ကစားရင် နဲနဲလေးတော့ ဖဲခိုးမှပဲ .....
ဆိုင်းသံရဲ့ စည်းချက် အမြန်နှင့်အတူ မင်းသမီးရဲ့ ကကွက်တို့ ပို၍လှုပ်ရှားတတ်ကြွဖွယ် ကောင်းလာသည်။ ဆလိုက်မီးရောင်တို့ရဲ့ ရွေ့လျားမှုကြောင့် ပရိတ်သတ်အားလုံး ကကွက်နှင့် သီချင်းသံတွင် မျောပါနေကြသည်။
"ဟိုတခါ ဖဲကောင်းတုန်းက မင်းရဲ့မျက်နှာ၊ ငါပြန်ရှုံးသွားလို့ ချေးငှားတဲ့အခါ ၊
မင်းမျက်နှာကြီးက အီးမှန်သွား ဖြတ်ရိုက်ချင်စရာ ..ကောင်းတဲ့မျက်နှာ...၊
ဒီတခါအကြွေးမပေးလို့ မင်းရဲ့ မျက်နှာ၊ နင်ထင်တာမပေးတော့ဘူးလို့ ပြောလိုက်စမ်းပါ
ကံမကုန်ရင်ငါ ပြန်ဆပ်ပါ့မယ် ချေးငှားသမျှတွေ မဆုံးစေရပါ "
သီချင်းသံ တီးလုံးသံ ကကွက်နှင့် ဆလိုက်မီးရောင်တို့ အားလုံး ချိန်သားကိုက်စွာ ရပ်ဆိုင်းသွားသည်။ ဇာတ်စင်အလယ်မှ မီးရောင်တို့ ပြန်လင်းလာချိန်တွင် မင်းသမီး ကြည်ဖြူပိုင်မှာ ပရိတ်သတ်ကို နှုတ်ဆက်၍ ဇာတ်စင်အနောက်ကို ဝင်သွားကာ လူရွှင်တော်တို့ အသီးသီး ထလာကြကုန်သည်။
မိုးမောင် ။.......။ " ဇာတ်ဆရာ မြစ်ကျိုးအင်း ရွေးထားတဲ့ မင်းသမီးတွေက ကကြိုးကကွက် တယ်ပိုင်ပါလား"
မိုးကုတ်သား ။......။ " ရွေးထားတဲ့မင်းသမီးတွေတင် မဟုတ်သေးဘူးလေ ပျက်လုံးတွေကလည်း အလန်းတွေပဲ မဟုတ်လားဗျ "
ကိုလူထွေး ။......။ " မင်းသမီးတွေ ပျက်လုံးတွေ လန်းတာလည်း မပြောနဲ့လေ ဇာတ်ဆရာက ထိုင်ဝမ် မှာပဲ ၅ နှစ်ကြာတယ် "
မိုးကုတ်သား ။.......။ " အော်.... သဘင်ပညာ ဆည်းပူးတာလား "
ကိုလူထွေး ။........။ " မဟုတ်ဘူး ဆိုင်းဘုတ်ကြီး အောက်မှာ အကြော်ရောင်းတာ "
" ဂွမ်းးး " ကိုလူထွေးခေါင်းကို ဝိုင်းတီးကြကုန်သည်။
မိုးမောင် ။.......။ " ကျနော်တို့ လူရွှင်တော်တွေဆိုတာ ပရိတ်သတ်ကို ရယ်မောပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ရသလို လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ခေတ်အခြေအနေကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ပြီး အမြင်မတော်တာတွေကို ပျက်လုံးထုတ်ရမှာပဲ မဟုတ်လားဗျ"
မိုးကုတ်သား ။.......။ မှန်ပါပေတယ် ကမိုးမောင်ရေ
ကိုလူထွေး ။.......။ " ခေတ်ရဲ့ လွဲချော်ပုံဆိုလို့ ကျွန်တော်စီးပွားရေး လုပ်တဲ့အကြောင်းလေး ပြောချင် သေးတယ်ဗျ "
မိုးမောင် ။.......။ " ဘယ်လိုများပါလိမ့် "
ကိုလူထွေး ။.......။ " ကျွန်တော်က မြန်မာပြည်ပြန်တော့ စုဆောင်းထားတဲ့ငွေလေးနဲ့ အတည်တကျ အလုပ်လေး ဖြစ်အောင် အင်တာနက်ဆိုင်လေး ဖွင့်တယ်ဗျ ။ သိတဲ့အတိုင်းပဲလေ အခုချိန်မှာ အင်တာနက်ဆိုင်တွေက နေရာတိုင်း ရှိနေတော့ ကျွန်တော့်ဆိုင်က ပုံမှန်လေးပဲပေါ့ ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်ဆိုင်လေး လူစည်ကားအောင် အစီအစဉ်တခု လုပ်လိုက်တယ်လေ "
မိုးမောင် ။.......။ " ဘယ်လို အစီအစဉ်များ ပါလိမ့်ဗျာ"
ကိုလူထွေး ။......။ " ကျွန်တော်က ထူးထူးခြားခြားလေးလည်း ဖြစ်အောင် သုံးတဲ့သူတွေလည်း ဈေးနည်းနည်း သက်သာအောင် ဆိုပြီး အွန်လိုင်းမှာ စကားလာပြောတဲ့သူတွေ စကားပြောနေရင်း ကြားလား ကြားလား မေးတဲ့ အချိန်တွေအတွက် ငွေပေးစရာ မလိုဘူးလို့ ကြေငြာလိုက်တယ် အဲဒီလိုလည်း ကြေငြာပြီးရော ဆိုင်မှာ လူတွေဆိုတာ ကြိတ်ကြိတ်တိုး နေတာများဗျာ အားရစရာပဲ "
မိုးကုတ်သား ။.......။ “ ဒါဆို ကိုလူထွေးကြီး စီးပွားဖြစ်ပြီပေါ့ ”
ကိုလူထွေး ။......။ “ ရှိတဲ့အရင်းလေးပါ ပြုတ်သွားပြီ တနာရီသုံးတိုင်း နာရီဝက်ခပဲ ရတော့တာကိုးးး”
လူရွှင်တော်များမှ သတိအနေအထားဖြင့် မတ်မတ်ရပ်ကာ သံပြိုင်ညီညာစွာ သီဆိုကြလေသည် ။
“ ဒါတို့ပြေ (ပြည်)...ဒါတို့မြေ ...ဒို့မပိုင်တဲ့မြေ ”
မိုးမောင် ။.......။ “ မြန်မာပြည်အကြောင်းဆိုလို့ ကျနော် မြန်မာပြည် တခါပြန်တော့ ရဲစခန်းမှာ ခံဝန်လက်မှတ် ထိုးခဲ့ရသေးတယ် ”
ကိုလူထွေး ။.......။ “ ဟေ ...ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ ”
မိုးမောင် ။.......။ “ ဒီလိုဗျ ကျနော် မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တဲ့ ညမှာပဲ စိတ်ပျက်စရာနဲ့ ကြုံရတယ် အဲဒါက မီးခဏ ခဏ ပျက်တာဗျ ၊ ပြန်မရောက်တာ ကြာပြီဆိုတော့ ကျနော့်အတွက်တော့ ထူးဆန်းနေသလို စိတ်လည်း ပျက်ရပါတယ်ဗျာ ။ ဒါနဲ့ နောက်တနေ့ရောက်တော့ မီတာရုံးသွားပြီး မင်းတို့ မီတာခ မှန်မှန် ကောက်ပြီး မီးကိုတော့ ပုံမှန် မပေးပါလားကွ လို့ သွားပြောမိတယ် အဲဒါကို ၀တ္တရား နှောင့်ယှက်ပါတယ် ဆိုပြီး ရဲတိုင်လို့ စခန်းအထိရောက်သွားရတာ ”
မိုးကုတ်သား ။.......။ “ တော်သေးတာပေါ့ဗျာ လက်မှတ်ပဲ ထိုးခဲ့ရလို့”
မိုးမောင် ။.......။ “ စခန်းမှူးကြီးကလည်း သဘောကောင်းရှာပါတယ် နောက်ဆိုရင် မီးခဏခဏ ပျက်တယ်လို့ မပြောနဲ့ ပြောချင်ရင် ဒီလိုပြောဆိုပြီး သင်ပေးတယ်ဗျ သူပြောတာလည်း မှန်တာပါပဲ ”
ကိုလူထွေး ။......။ “ ဘယ်လိုများပါလိမ့်”
မိုးမောင် ။......။ “ မီးခဏခဏ ပြန်လာတယ်လို့ ပြောတဲ့လေ”
လူရွှင်တော်များမှ သတိအနေအထားဖြင့် သံပြိုင်ညီညာစွာ သီဆိုကြလေသည်။
မိုးကုတ်သား ။........။ " ငါ့ကိုကျတော့ လူကြီးတွေကစေတနာ ထားပေးတယ်ကွ "
ကိုလူထွေး ။........။ " အဟွတ် အဟွတ် "
မိုးမောင် ။........။ " ကိုလူထွေး ချောင်းဆိုးတာကလည်း ကောက်ကာငင်ကာကြီး "
ကိုလူထွေး ။........။ "အေးကွ နားက ဘာဖြစ်မှန်း မသိပါဘူး"
" ဂွမ်းးးး " မိုးကုတ်သားမှ လင်ဗန်းဖြင့်တီးကာ
" လည်ချောင်းက ဘာဖြစ်မှန်း မသိဘူး လုပ်ပါဗျ ချောင်းဆိုးတာပါ ဆိုမှ နားနဲ့ ဆိုင်ပါ့မလား "
ကိုလူထွေး ။......။ " အေး...အေး.. မှားသွားလို့ လည်ပင်းက ဘာဖြစ်မှန်းမသိတာကွ
"မိုးမောင် ။........။ " မိုးကုတ်သား ရေ ဆက်ပါအုံးကွ"
မိုးကုတ်သား ။.......။ " ဒီလိုကွ ငါ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က မြန်မာပြည် ပြန်တယ်လေ ငါပြန်တဲ့အချိန်ကွာ တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် မဲဆန္ဒ ကောက်ခံပွဲကြီးနဲ့ တိုးပါလေရော ခြိမ့်ခြိမ့်သဲသဲ ကျင်းပနေတာများကွာ အားရစရာကြီး"
ကိုလူထွေး ။.......။ " အဟွတ် အဟွတ် "
မိုးမောင် ။.......။ " ဒီလူကြီးနော်...သွား..သွား စင်ထောင့်မှာ သွားနေ ဒီမှာ စကားပြောရတာ အရှိန်ပျက်တယ် "
ကိုလူထွေးလည်း စင်ထောင့်သွားပြီး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ ပရိတ်သတ်ကို လက်ခါပြနေသည်။ မိုးကုတ်သား ကိုလက်ညိုးထိုးပြပြီး ကိုယ့်ခေါင်းကိုယ် ညာလက်ဖြင့်ထောက်ကာ ဘက်လက်က ခါပြနေသည်။ မိုးကုတ်သား တော့ ခေါင်း ချောင်သွားပြီဆိုတဲ့ သဘောကို ပြနေခြင်းဖြစ်သည်။
မိုးကုတ်သား ။.......။ " အဲဒါနဲ့ ငါလည်း ကြုံတောင့်ကြုံခဲ မဲပေးပွဲကြီး ဆိုတော့ ဝင်နွဲမယ်ပေါ့ မနက်ပိုင်း စောစောစီးစီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘီယာဆိုင်ထိုင်ပြီး .... "
"ဂွမ်းးး " မိုးမောင်မှ လင်ဗန်းဖြင့် မိုးကုတ်သား ခေါင်းကို ရိုက်ကာ
" စောစောစီးစီး ဘာဘီယာဆိုင်လဲ လ္ဘက်ရည် ဆိုင်လုပ်ပါကွ "
မိုးကုတ်သား ။......။ "အေးအေး မှားသွားလို့ ၊ ဒါနဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်က ထပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မဲရုံကို ချီတက် ကြတာပေါ့ ...။ မဲရုံကိုသာ သွားနေတာ ဘယ်လိုမဲပေးရမလဲ မသိဘူး သူငယ်ချင်းတွေ ပေးသလို ပေးမယ် ဆိုပြီး တွေးသွားတာလေ ဟိုရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေက ကြက်ခြေခတ် တွေပေးကြတာ နဲ့ ငါလည်း ကြက်ခြေခတ် ပေးလိုက်တာပေါ့ "
ဇာတ်စင်ထောင့်မှ ကိုလူထွေးက လက်ခုပ်တီး၍ ထ က နေသည်။
မိုးမောင် ။.......။ " ဒါလားကွ မင်းအပေါ်စေတနာ ထားတယ်ဆိုတာ "
မိုးကုတ်သား ။......။ " နေအုံးကွ မပြီးသေးဘူး ငါတို့တွေလည်း မဲပေးပြီး ပြန်လာတော့ လမ်းရောက်မှ ငါ့ ဟန်းဖုန်း ကျန်ခဲ့မှန်း သတိရတာနဲ့ မဲရုံကို သွားပြန်ယူတာပေါ့ မဲရုံလည်း ရောက်ရော ငါ ပေးထားတဲ့ ကြက်ခြေခတ် မဲကို တခုစီ ခွဲပြီး အမှန် နှစ်ခု လုပ်နေတာ တွေ့ရတာနဲ့ ငါလည်း အံ့သြသွားပြီး ဒါဘာလုပ်တာလဲ လို့ မေးလိုက်တယ် "
မိုးမောင် ။......။ " ဒါ မရိုးမသား လုပ်တာပေါ့ "
မိုးကုတ်သား ။......။ " မဟုတ်ဘူးကွ ဒါ ငါ့အပေါ်စေတနာထားတာဆိုပြီး ရှင်းပြတယ် ညီလေးရယ် တဲ့ မင်းက ကြက်ခြေခတ်ထားတော့ တုတ်ချောင်း ၂ ခုခြစ်ရတယ်လေ ဒါဆို မှင်ပိုကုန်တယ်ကွ ဟော အကိုကြီးက အခုလို တခုစီ ပြန်ခွဲပေးလိုက်တော့ ညီလေးနဲ့ သားသမီး တယောက်ယောက်အတွက် အဆင်ပြေသွားတာပေါ့တဲ့ "
မိုးမောင် ။......။ " အေးလေ ဒါလည်း မှန်တယ်လေကွာ"
မိုးကုတ်သား ။......။ " မဟုတ်ဘူးလေကွာ ငါက မိန်းမတောင်မရသေးတာ ဒါနဲ့ ငါက ဒါဆိုအကိုကြီးမှားနေပြီဗျ ကျွန်တော်က လူပျိုပါလို့ ပြောတော့ သူက ဒါဆို ပိုတောင် ကောင်းသွားပြီတဲ့ ညီလေး မိန်းမရပြီး သားသမီး မွေးတဲ့အခါ အခုထဲက သားသမီးတွေအတွက်ပါ မဲပေးထားတယ် ဆိုပြီး ညီလေးကို သားသမီး တွေက ကျေးဇူး တင်မှာပေါ့တဲ့ ကဲကြည့် ငါ့အပေါ် ဘယ်လောက်တောင် စေတနာထားတယ်ဆိုတာ တွေ့ပြီမဟုတ်လား "
မိုးမောင် ။......။ " ဒီလိုဆိုတော့လည်း ဟုတ်တာပဲကွ"
ဇာတ်စင်ထောင်မှ ကိုလူထွေးကတော့ တိုင်နဲ့ ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်နေတော့သည်။
မိုးကုတ်သား ။......။ " ကျနော့်ကို ဆရာလုပ်ပြီး ရှင်းပြပေးတဲ့ အကိုကြီးက သေသေချာချာကြည့်မှ ကျောင်းသား ပဲ ရှိသေးတာကွ "
မိုးမောင်။......။ "ဟုတ်လို့လားကွာ "
မိုးကုတ်သား။......။ " ဟုတ်တယ်ကွ အဖြူအစိမ်း ဝတ်ထားတယ်လေ"
"ဂွမ်းးး" ကိုလူထွေးမှ လင်ဗန်းဖြင့် မိုးကုတ်သား ခေါင်းကိုဝင်တီးလိုက်တော့သည်။
ထို့နောက် လူရွှင်တော်များမှ သံပြိုင်ညီညာစွာဖြင့် သီဆိုကြလေသည်။
"ဒါတို့ပြေ (ပြည်) .... ဒါတို့မြေ .... ဒို့မပိုင်တဲ့မြေ "
မိုးမောင် ။.......။ " ဘယ့်နှယ်ဗျာ ဒီဇာတ်ဆရာပျက်လုံးကောင်းကောင်းလုပ်ပါဆို အိမ်ကမိန်းမ ငပိကြော်ပို့ရမယ့် လမ်းကြောင်းပဲ ဆွဲဆွဲတင်နေတယ်။ တော်ပြီ အငြိမ့်မကတော့ဘူး။ အခုပဲကြည့် အင်းစိန် ဈေးနားတောင်ရောက်တော့မယ် "
မိုးကုတ်သား ။.....။ အသေဝနာစ ဗာလနံတဲ့ ဒီဇာတ်ဆရာနဲ့ ပေါင်းမိတာကိုက ကျုပ်တို့ငါးပါးတင်မကဘူး သံဃာစဉ်ပါမှောက်တာဗျ"
မိုးမောင် ။........။ " မိုးကုတ်သားရေ မင်းသမီး မြန်မြန်ခေါ်မှ ဖြစ်တော့မယ် ကြာရင် မလွယ်ဘူးကွ "
မိုးကုတ်သား ။.....။ " အေးကွ အခုအလှည့်ကျတဲ့ မင်းသမီးက ဘယ်သူတဲ့တုန်း "
ကိုလူထွေး ။.....။ " ဇာတ်ဆရာရဲ့ သမီး သုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆလူးလေးတို့ အဖွဲ့ရဲ့ အကအလှလေးတွေ ဝေဖန် အကဲဖြတ်ကြပါစို့"
မိုးကုတ်သား ။.....။ " ကိုလူထွေးရေ မင်းသမီးလေးတွေကို ခေါ်လိုက်ပါအုံး "
ကိုလူထွေး ။......။ " ဘီလူးဂတုံးတောင် အထူးမပုန်းရှောင်ရင် ရူးမဆုံးအောင် ဖြစ်သွားနိင်လောက်တဲ့ ကဲ.... ဆလူးသုံးကောင်ရေ အချိန်ကျပြီ ထွက်ခဲ့တော့ ...."
ကိုလူထွေးရဲ့ ခေါ်သံဆုံးလျင် မင်းသမီး ၃ ယောက်တို့ အပြိုင်အဆိုင် ထွက်လာကြသည်။ ထို့နောက် တိုင်ပင်ထားသလို တယောက်ကို တယောက်ကြည့်ကာ ပရိတ်သတ်ကို လက်အုပ်ချီ၍ HAPPY NEW YEAR ဟု နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်သည်။ ပရိတ်သတ်ကို နှုတ်ဆက်ပြီးလျင် လူရွှင်တော်များဘက်လှည့်ကာ မင်းသမီးလေး ကွန်မန်ဒို ဆိတ် မှ " မင်္ဂလာပါ အကိုတို့ရေ " ဟု နှုတ်ဆက်သည်။
လူရွှင်တော်များမှ "မင်္ဂလာပါ ညီမလေးတို့ ရေ " ဟု ပြန်လည်နှုတ်ဆက်သည်။
မင်းသမီးလေး သံမဏိဘဲ ကလည်း အားကျမခံ " ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ ညချမ်းပဲ မဟုတ်ပါလားရှင် " ဟုဝင်ပြောသည်။
လူရွှင်တော်များ ။........။ " မှန်ပါတယ် ညီမလေးတို့ရေ "
ကိုလူထွေး ။.......။ " မင်းသမီးလေးတွေက ပရိတ်သတ်ကြီးကို ဘာသီချင်းလေးနဲ့ ဖြေဖျော်မယ် စိတ်ကူး ထားတယ် ဆိုတာ ပြောပြပါအုံး"
ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား ပြေပြစ်ပြီး အရပ်အမောင်း အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ အငယ်ဆုံးမင်းသမီးလေး မူယာဝက် မှ လူရွှင်တော် သုံးယောက် ကိုကြည့်ကာ " ငါရှိသ၍ ငါ့သားသုံးယောက်မငတ် စေရဘူး " ဟုပြောလိုက်သဖြင့် လူရွှင်တော်သုံးယောက် မျက်လုံးပြူးကာ "ဟေ " ဟု သံပြိုင်ညီညာ အော်လိုက်ကြတော့သည်။
မူယာဝက် ။......။ " ဒီလိုပါ အကိုတို့ရေ အဆိုတော် ရဲလေး ဆိုထားတဲ့ 'ထိပ်ဆုံးမှာ အမေ' ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ ဒါပေမယ့် သာမီးတို့ဒက်ဒီ မြစ်ကျိုးအင်း နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် သီချင်းနာမည်ကိုတော့ ပြောင်းထားပါတယ် သီချင်းနာမည်က 'ထိပ်တုံးမှာ အဖေ' လို့ အမည်ရပါတယ်ရှင် ခံစားနားဆင်ပေးကြပါ "
စူးရှတောက်ပသော မီးရောင်တို့ မှိန်သွားချိန်တွင် ဆိုင်းဆရာ သေရွာပြန်အိမ်ရဲ့ လင်းကွင်းနှစ်ချပ်ကို ပွတ်ဆွဲထားသော ဒီဂျေ တီးလုံးသံ ထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် မင်းသမီး သုံး လက် အပြိုင်အဆိုင် တွန့်လိန်ကောက်ကွေးကာ အကြွေးရှင်ကို ရန်တွေ့သော လက်ဟန်ခြေဟန်များဖြင့် Rap စာသားကို စဆိုကြတော့သည်။
သံမဏိဘဲ ။......။ "သမီးသုံးယောက်ကိုထားပီး နောက်မီး လင်းနေတဲ့အဖေ
သမီးတွေရဲ့ကျေးဇူး နားလည်ပီးတော့ သိတတ်ဖို့လည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
နောက်မီးလင်းလို့ မိသားစုဘဝ... နွေးထွေးမှုတွေ ပျောက်ကွယ်ခဲ့တယ်
ကွန်မန်ဒိုဆိတ် ။......။ " သမီးသုံးယောက်ရှိနေသ၍ အဖေမငတ်စေရဘူး ကဲနေဖို့လည်း မပြတ်စေရဘူး
နေ့နဲ့ည အဖေ့မှာတော့ ပျော်နေခဲ့တယ် စီးပွားရေးဆုံးရှုံးသွားတာ အငယ်လေးတွေနဲ့ ကဲမဝလို့ပဲ "
မူယာဝက် ။......။ " မြိန်ရေယှက်ရေ အသားတုံးတွေကို အဖေစားခဲ့တာ ငါးပိရည် နဲ့ အရိုးဟင်းတွေက သမီးတို့အတွက်လား ဒါတွေက သမီးတို့အတွက် တရားလား ၊လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံငါးဆယ် ဒါလောက်နဲ့ ချဲမထိုးနိုင်ဘူး အဖေ့မျက်နှာမကောင်းဘူး အိမ်ထဲမှာ ဖွက်ထားသမျှကို လိုက်ရှာနေတယ် "
ကွန်မန်ဒိုဆိတ် ။.....။ "လောင်းကစားတွေ ဆုံးရှုံးသွားတော့ သမီး သုံးယောက်က ကျွေးမွေးခဲ့ ငါရှိသရွေ့ ငါ့သမီး သုံးယောက်မငတ်စေရဘူး ပညာရေး မပြတ်စေဘူးလို့ နေ့နဲ့ည ဘာမှမလုပ်ဘဲ ထိုင်တွေးနေတယ် "
Rap စာသားကို အပြိုင်အဆိုင် ရန်တွေ့သလို သီဆိုပြီး တယောက်တမျိုး အကွက်ဆန်းကကာ အပြိုင်ကျဲနေသည်။ ဆိုင်းဝိုင်းမှလည်း မြူးမြူးကြွကြွ တီးပေးနေသဖြင့် လူရွှင်တော်များပါ ဒွန့် ကုန်ကြပြီ ။ မင်းသမီး သုံးယောက် မှာ သံစဉ် သီဆိုရသော အပိုဒ်ကို ခံစားချက်အပြည့်ဖြင့် သံပြိုင်ညီညာစွာ သီဆိုလိုက်ကြသည်။
" အဖေမပိုနဲ့ KTV ခန်းမထဲမှာ ပျော်နေမှာလား
လက်ကျန်နဲ့ ဒီမိသားစု ဘယ်လိုမျိုမလဲ
အဖေ...မပိုနဲ့ နောင်ညများလည်း အမြဲတမ်း ဂေါ်နိင်ပါစေ ....
မရပ်ခဲ့ဘူး ဘယ်လိုပြောပြော အဖေ့ရဲ့ အကျင့်တွေ
ဘုံးထားသမျှ ကြိတ်သုံးပါလေ ...အဖေ့ဘဝအတွက် အသင့်တော်ဆုံးက... ထိပ်တုံးပါ အဖေ "
လင်းကွင်းနှစ်ချပ်ဖြင့် ပွတ်ဆွဲလိုက်သော ဒီဂျေ ပွတ်သံ ရဲ့ အဆုံးတွင် ဆလူးလေးတို့ရဲ့ ထိပ်တုံးမှာအဖေ သီချင်း လည်းပြီးဆုံး သွားခဲ့ပြီ။ ထိုနောက် ပရိတ်သတ်ကို အသီးသီး နှုတ်ဆက်ကာ ဇာတ်စင်နောက်သို့ ဝင်သွားကြတော့သည်။ ဒွန့်နေကြသော လူရွှင်တော်တို့လည်း အရှိန်သတ်ကာ ဇာတ်စင်အလယ်တွင် စုရုံးလာကြသည်။
မိုးမောင် ။......။ " သီချင်းလေး နားထောင်ရတာ သူတို့အဖေကို တော်တော်ချစ်ပုံပဲဗျ "
ကိုလူထွေး ။.......။ " ဒါမျိုးပြောတာပေါ့ ကြောက်ခမန်းလိလိ ချစ်တယ်ဆိုတာလေ "
မိုးကုတ်သား ။.......။ " စမြုံ့ပြန်နေလို့ပဲ မပြီးသေးဘူးဗျ ကျနော်တို့ရဲ့ တခန်းရပ်ဟာသလေး နဲ့လည်း ဖျော်ဖြေ လိုက်ကြပါအုံးစို့ "
မိုးမောင် နှင့် ကိုလူထွေး မှ " သင့်မြတ်ပါတယ်ဗျာ " ဟုပြောကာ လူရွှင်တော် သုံးယောက် ဇာတ်စင် အနောက်သို့ ဝင်သွားကြကုန်သည်။
လူရွှင်တော် သုံးယောက် ဝင်သွားပြီးချိန်တွင် ထိုးထားသောမီးဆလိုက်တို့ အနည်းငယ် အားပျော့ကာ အငြိမ့်စင် ကို ခပ်မှိန်မှိန် လုပ်ပေးထားသည်။ ထို့နောက် ပြန်လင်းလာချိန် အငြိမ့်စင်ပေါ်တွင် လူနေအိမ်ခန်း တခုရဲ့ အပြင်အဆင်မျိုး ဖြစ်နေသည်။ အိပ်ခန်းထဲရှိ ကုတင်ပေါ်တွင် လူရွှင်တော် မိုးမောင်မှ လူမမာဟန်ဖြင့် ပက်လက် ကလေးအိပ်ကာ အသက်ကို ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက် ရှုနေသည်။ လူနာ ခုတင်ရဲ့ဘေးတွင်တော့ တင်တု ရင်တု တပ်ထားသော လူရွှင်တော် ကိုလူထွေးမှာ လူမမာရဲ့ ဇနီးသည် မီမီထွေး အဖြစ် သရုပ်ဆောင်၍ အပူလုံးကြွနေသော ပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ဆံထုံး တုကြီး ဖရိုဖရဲဖြစ်ကာ လမ်းမဆီသို့ မျှော်ငေးနေသည်။ မကြာမှီ ဆရာဝန်မိုးကုတ်သား ဆေးအိတ်ဆွဲ၍ ရောက်လာတော့သည်။ ဆရာဝန် ရောက်လာသဖြင့် မီမီထွေးမှာ အပြေးအလွှားသွားကာ ဆေးအိတ်ကို ကူဆွဲပေးလေသည်။
မီမီထွေး ။.......။ "ဆရာ အထွေးရဲ့ယောကျာင်္းကို ကယ်ပေးပါဆရာရယ် "
ဆရာဝန် ။.......။ "စိတ်မပူပါနဲ့လေ ကျနော် စမ်းသပ်ပါအုံးမယ် ဒါနဲ့ သူ့ကို ဘာကျွေးထားသေးလဲ "
မီမီထွေး ။........။ "သူ အားနည်းနေပုံရတယ်ဆရာ အရည်ပဲ ဝင်တယ်ဆရာ ဟိုဟာမဝင်ဘူး "
ဆရာဝန် ။.......။ "ဘာ....ဘာ မဝင်တာလဲ "
မီးမီထွေး ။.......။ "အစာမဝင်ဘူး ပြောတာပါ အထွေးလည်းစိတ်ပူနေလို့ အယောင်ယောင်အမှားမှား ဖြစ်နေလို့ပါ "
ဆရာဝန်မှ လူနာကုတင်နားကပ်ကာ စမ်းသပ်ကြည့်ရှုနေသည်။ လူနာရဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ကို တချက်စမ်းသလို၊ နားကျပ်ဖြင့် ရင်ဘတ်ကိုထောက်နားထောင်ကာ မျက်ခွံကိုဟပြီး ပုံမှန်စစ်ဆေးမှု လုပ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဆရာဝန်မှ " အပူချိန်တိုင်းမယ် ပါးစပ်ဟ " ပါဟုပြောလိုက်သည်။
လူနာ ။.......။ " သီးခံပါ ဆရာရယ် ကျနော်အရမ်း အားနည်းနေလို့ ပါးစပ်ကိုတောင် မဖွင့်နိင်ပါဘူးဗျာ ကျနော်လေ အစားအသောက်တွေလည်း မမှန်တာကြာပြီ ညဘက်တွေဆိုလည်း အိပ်မပျော်တာ များပါတယ်ဆရာ ဒါကြောင့် အရမ်း အားနည်းနေတယ် ထင်တယ်ဆရာ ပါးစပ်တောင် ဖွင့်နိင်မယ် မထင်ဘူး "
ဆရာဝန်မှ ခါးကြားထိုးထားသော စက္ကူလိပ်ဖြင့် ရိုက်ကာ
" ဒီလောက်တောင် စကားတွေ ပြောပြီးမှ ပါးစပ်မဖွင့် နိင်ဘူးတဲ့လား မရဘူး အခုဖွင့် "
လူနာမှ ပင်ပန်းကြီးစွာသော ပုံစံဖြင့် ပါးစပ်ဟပေးလိုက်ရသည်။ ဆရာဝန်မှ အပူချိန်တိုင်းပြီး လိုအပ်သည့် စမ်းသပ်မှုများ ပြုလုပ်ကာ ခေါင်းကို အနည်းငယ် ခါရမ်းလိုက်သည်။
မီမီထွေး။......။ "ဆရာရယ် အထွေးယောကျာင်္း အခြေအနေ ဘယ်လိုလဲ"
ဆရာဝန်။.....။ " အိမ်မှာဆက်ထားရင် အခြေအနေပိုပြီး ဆိုးသွားနိင်တယ် အကောင်းဆုံးကတော့ လူနာကို ရန်ကုန်က အထူးကုဆေးခန်း $$$ ကို ပို့လိုက်ပါ "ဆရာဝန်စကားကြားလိုက်ရချိန်တွင် ပါးစပ်ဟဖို့ရန် ပင်ပန်းကြီးနေသော လူနာခင်မျာ ကုတင်ပေါ်မှ ကောက်ကာငင်ကာ ဆင်းကာ ဆရာဝန်နှင့် သူ့မိန်းမ မီမီထွေးကို တလှည့်စီ ဒူးထောက်ပြီး
" မိန်းမရယ် ငါမင်းလက်ပေါ်မှာပဲ သေပါရစေနော် "
" ဆရာရယ် ကျွန်တော်မိန်းမအတွက် အိမ်ပိုင်လေး ချန်ခဲ့ချင်လို့ အထူးကုဆေးရုံကို မသွားပါရစေနဲ့ ဆေးရုံတက်ပြီးမှ ကျွန်တော့်အတွက် အသုဘ စရိတ်လေးတောင် မကျန်မှာစိုးလို့ပါဗျာ"
လူနာရဲ့ သနားစဖွယ် အသံဖြင့်လိုက်ဖက်အောင် ဆိုင်းဆရာ သေရွာပြန် အိမ် မှ မျောက်မင်း အူသံဖြင့် ငိုချင်းချပေးနေသည်။ အထွေးရဲ့ ပါးနှစ်ဘက်ပေါ် စီးကျလာသော မျက်ရည်စများ နှင့်အတူ တောတန်းပုံစံ ရေးဆွဲထားသော ကားလိပ်တခု တဖြည်းဖြည်း ကျလာတော့သည်။ ထို့နောက် ကားလိပ်နောက်မှ ဆရာဝန်၏ အသံဆက်၍ ထွက်ပေါ်လာသည်မှာ ...
" ဒီအတွက်တော့ စိတ်မပူပါနဲ့ဗျာ ခင်ဗျား ဆေးရုံရောက်ရောက်ချင်း နာရေးကူညီမှုအသင်းကို ဖုံးဆက်ထားပေးပါ့မယ်"
ထို့နောက် ကားလိပ်ကို ပြန်ဆွဲတင်လိုက်ချိန်တွင် မင်းသမီးငါးယောက် နှင့် လူရွှင်တော် သုံးယောက်တို့ ပရိတ်သတ်ကို လက်အုပ်ချီကာ သံပြိုင်ညီညာစွာ နှုတ်ဆက်လိုက်ကြတော့သည်။
" ပရိတ်သတ်ကြီး အားလုံး ပျော်ရွှင်ဖွယ် မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ "
ထို့နောက်တွင်တော့ ကြက်သွေးရောင် ကန့်လန့်ကာကြီး တအိအိ ဖြင့်ကျလာ ကာ ဘလော့ဂါ အငြိမ့် တခန်းရပ်နား လိုက်တော့သည်။
ဘလော့ဂ်ဂါ အငြိမ့်လေးအတွက် တကူးတက ပန်းချီဆွဲပေးသော ပန်းချီဆရာ ကိုဥာဏ်စိုး ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဤအငြိမ့်တွင် နာမည် အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ကြသော လူရွှင်တော်များဖြစ်တဲ့
ဆိုင်းဆရာ အဖြစ် သေရွာပြန်အိမ်
မူယာ ဝက် တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း
၂၀၁၀ ရဲ့ ပထမဆုံးအချိန်မှာ ရယ်မော ပျော်ရွှင်စေချင်စိတ်ကြောင့်ရယ် ဘလော့တနှစ်ပြည့် အမှတ်တရ အဖြစ် ရည်ရွယ်ပြီး ဘလော့ဂါ အငြိမ့် (၃) ကို ရေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့က ညီမလေး နှင်းဟေမာ ရဲ့မွေးနေ့လည်း ဖြစ်လို့ သူ့အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်လို့ ဆိုနိင်ပါတယ်။
ပျက်လုံးတွင် နာမည်အသုံးပြုခဲ့မိသော ဘလော့ဂါ သူငယ်ချင်းများကိုလည်း အပျော်သဘောနှင့်ရေးတာ ဖြစ်လို့ နားလည်ခွင့်လွှင့်စေချင်ပါတယ်။ မိမိဘလော့ဂ် နာမည် ပါတာကို မနှစ်သက်သူများ ရှိပါက ပြောခဲ့နိင်ပါတယ် ပြန်ဖြုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်လိုသူများလည်း စာရင်းပေးခဲ့ပါ ထပ်ဖြည့်ပေးပါ့မယ်။
ဤ အငြိမ့်တွင်ပါဝင်သော ခင်မောင်အုန်း ပျက်လုံးမှ လွဲ၍ ကျန်တဲ့ ပျက်လုံးများ အားလုံး မည်သည့် စာမျက်နာပေါ်တွင်မှ မရှိသေးသော ကိုယ်ပိုင် ပျက်လုံးများဖြစ်ပါတယ်။ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသော ပျက်လုံးများ ပါခဲ့က နားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးစေချင်ပါတယ်။
(ဇာတ်ဆရာတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဒီပွဲခွင် လူဝင် များလျင် နောက်ပွဲခွင်များ ဆက်ကပါအုံးမည်။)
အားလုံးသော စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေ ကြပါစေ ၊။။။။
( မေတ္တာဖြင့် သရုပ်ဖော်ပန်းချီ ရေးဆွဲပေးသော ပန်းချီဆရာကိုဥာဏ်စိုး အား လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေခင်ဗျာ။ )
Posted by မြစ်ကျိုးအင်း at 12:01 AM Labels: အငြိမ့်စင်
ရော် ဘာလို့ Your comment has been saved and will be visible after blog owner approval. အဲဂလိုလုပ်ထားတာလဲ မမိုက်ဘူးကွာ စာဖတ်ဦးမယ် ဟွန့်
တစ် မရတော့တာ သေချာတယ်။ ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးး
ထပ်ပြောမယ် Happy New Year 2010 နော် ၊
ဟားဟားဟားဟား..... ဟီးဟီးဟီး.... ဟိုးဟိုးဟိုး ............ အဲလိုရယ်လိုက်ချင်တာသိလား..... လောလောဆယ်မအားသေးလို့ နောက်မှပဲ ရယ်တော့မယ် ဟီး
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ။ နှစ်သစ်မှာ အရာအားလုံး အောင်မြင်ပါစေ။။
နှစ်သစ်မှာ အငြိမ့်ပွဲ လာကြည့်တယ်။ လူရွှင်တော် ပျက်လုံးတွေ ကောင်းတယ်။ ဇာတ်ရုံရှေ့မှာ အကြော် ၅နှစ်ရောင်းပြီး ရလာတဲ့ အတွေ့အကြုံပေကိုး :))
ကွန်မန်ဒို ဆိတ် said...
lady's dream!!!!!!!!!! ပဲ ချားချင်ဒယယယယ် ဟဟားးးးးးးးးးးးးးး
နှစ်သစ်မှာ အပီ ကဲနိုင်ပါစေစစစစ ဟေဟေးးးးး
ကျနော်တို့ လူငယ်တွေ နောက်ပွဲဆက်ငှားဖို့ ငွေစုနေကြပါပြီ ခင်ည
တကယ်ကောင်းတယ်.. ရယ်နေရတာ တအားပဲ...
ဘလော့ဂါ နာမည်တွေနဲ့ ကာရန်ယူထားပုံကလည်း မိုက်တယ်... မယ်ကိုးနေရာနားရောက်မှ နဲနဲဖောက်သွားတာ...
နှစ်သစ်မှာ အငြိမ့်လာကြည့်တယ်။ လူရွှုင်တော် ပျက်လုံးတွေ ကောင်းလှချည်းလား။
ဇာတ်ရုံရှေ့မှာ အကြော် ၅နှစ်ရောင်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံပေကိုး :))
ကျမယောက်ျားတော့ ရှေ့နေငှားမှ ထောင်လုံးလုံးကျ...
$$$ ကိုရောက်မှ အသက်ပျောက်ရပါပေါ့တော့...
တကယ်ကို ထူးခြားတဲ့ ၂၀၁၀ ပဲ...
ဒီလိုအိုင်ဒီယာ လန်းလန်းတွေနဲ့ အမြဲ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ...
အောင်မြင် အေးချမ်းတဲ့ နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ မြစ်ကျိုးအင်းရေ...
ဟဟ ကိုကျိုးတော့ အနော့ဖဲ့ မယ့်အထဲပါသွားအုန်းမယ်နော်
ဟဟ ဖတ်ပြီးရီနေတယ်ဗျာ ချစ်ကိုရ
ကိုလူထွေးနာမည်အရင်းက ဒီလိုလား အခုမှသိတော့တယ် မျက်နှာသီချင်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲး) နောက်ပြီး ဘလော့ဂါတွေရဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ပြက်လုံးတွေလည်း မိုက်တယ်ဗျာ ကာရန်ကို လိုက်နေတာပဲ အမှတ်တရ နှစ်သစ်ကူးညချမ်းလေးပါပဲ ဆက်ပြီးရေးပေးဦးနော်
ကိုလူထွေးနာမည်က ဇာတ်ဆရာလက်စွမ်းပြလိုက်တာပါ... တကယ်မဟုတ်ပါကြောင်း...
၂၀၁၀အ၀င်မှာ လင်ဗန်းစာမိတာ အချက်ပေါင်းမနည်းဘူး။ လုပ်ထားအုံးပေါ့ ဇာတ်ဆရာရယ်။
နောက်တစ်ပွဲကျမှ အမှောက်ဆွဲမယ် ဇာတ်ဆရာ။ အခုတော့ ကိုယ့်ရေချိန် ကိုယ်တိုင်းမရအောင်ဖြစ်နေပြီ။း)
အကိုမြစ်ကျိုးရေ အငြိမ့်က ရီရပဲ
အကြိုက်ဆုံးကတော့ ဝက်ဝံလေးတို့ရဲ့ ထိပ်တုံးမှာအဖေ သီချင်းကို အကြိုက်ဆုံး ... ဟားးးးးးးးးးး
၂၀၁၀ နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ် လူသစ်နဲ့ ဘဝအသစ်အတွက် ကြိုးပမ်းကြပါစို့
ရီရတယ် တိုတယ် ဖတ်ရတာ အားမရဘူးထင်ပါတယ် များများ တင်စေချင်ပါတယ် ဟဲဟဲ
ဘာဘဲပြောပြော နံမည်ပါလို့ ၂၀၁၀ မှာ အမှတ်တရ ဖြစ်သွားပြီ...အကိုမြစ်နှင့် တကွ ဘလော့ မောင်နှမများ အားလုံးကို ခင်မင်လျှက်ပါရှင်..။ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်......။
အစ်ကိုရေ ....နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ် လူသစ် နဲ့ အားပါးတရရယ်မော ပျော်ရွှင်ခွင့်ပေးခဲ့သော အမှတ်တရ မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးအတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ....။ညီမ ဘ၀မှာ အမြဲအမှတ်တရဖြစ်နေစေမဲ့ ....ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ်လေးပါပဲ .... အရေး အသား ကောင်းလိုက်ပုံများ ကတော့ ပို့စ်အရှည်ကြီးမနားတမ်းဖတ်လိုက်ရတာတောင် ပြီးဆုံးသွားမှာ စိုးမိပါရဲ့ ......း) ဇာတ်ဆရာရေ... အပြင်မှာသာ ဒီအငြိမ့်လေးတစ်ကယ် ကခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာတယ် ...... ရုံလျှံသွားမှာ .......း) အားလုံးကို ရယ်မောပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဘလော့ဂါအငြိမ့်မှာ ဇာတ်ဆရာ အစ်ကိုမြစ်ကျိုးအင်း တစ်ယောက် ထိုင်ဝမ်မှာ ဗူးသီးကြော် များများရောင်းကောင်းပါစေလို့ .... ရှေ့ထွက်မင်းသမီး နှင်းဟေမာ မှဆုမွန်ချွေလိုက်ပါတယ် အစ်ကိုရေ ...........းD
ကောင်းလိုက်တဲ့ အငြိမ့်ဗျာ။ ရုံတင်ဖို့ကောင်းတယ်။
ဘလော့ဂ်လေးလဲ တစ်နှစ်ပြည့်မှသည်နှစ်ပေါင်းများစွာ ပရိသတ်ကို တစ်ခုခုပေးနိုင်တဲ့ ပို့စ်တွေများများရေးနိုင်ပါစေ။
နှစ်သစ်နှင့်အတူ စိတ်သစ်လူသစ်နှင့် ရှင်သန်ကြည်နူးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ရယ်လိုက်ရတာ အူကို နာနေတာပဲ
ရီလည်း ရီရတယ် ရေးချက်တွေက ပိုင်းလည်းပိုင်သဗျာ
အားပေးလျက်ပါဘဲ ဗျာ . . . :)
နှစ်သစ်မှာ အင်အားသစ်တွေနဲ့ စာတွေအများကြီး ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ...
စကားမစပ် ဦးလူထွင်းက မယ်ကိုးနေရာနည်းနည်းထောက်နေတယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်ဆိုး ဆိုတဲ့ ကာရန်နဲ့ တင် တော်လောက်ပါပြီ :)
ဟိဟိ ကြည်ဖြူပိုင်က မင်းသမီးတဲ့
ဇာတ်ဆရာရေ ... နှစ်သစ်မှာ ဘာလာလာပေါ့ဗျာ
ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ရှေ့ဆက်ပီးပဲ ဂိုးနိုင်ပါစေ ..း)
နှစ်သစ်ကူး အငြိမ့်လာကြည့်တာ.. ပျော်စရာပဲး)
နှစ်သစ်ကို ရယ်ရယ်မောမောကြိုဆိုနိုင်သွားတာအတွက်ကျေးဇူးပါ မြစ်ကျိုးအင်းရေ
ဇာတ်ဆရာရေ ဘလော့ဂါတွေကြားမှာ ပျော်စရာတွေ များတာမို့ကျွန်တော် ရန်ကုန်သားလည်း ကားကြားထဲကနေပဲ တဟားဟား ရယ်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း “ တယ်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ ဇာတ်ဆရာ ကိုမြစ် ပါလား ကွယ်ရို့ ” ဆိုပြီး ချီးကျူးရင်း ရယ်မောရင်း လက်ဖျားခါရင်း သဘောတွေ့ ရင်း မနောခွေ့ ရင်း အစအဆုံးတိုင် ကြည့်ရှု အဲ ဖတ်ရှုသွားပါကြောင်း သိပ်ကောင်းတာပဲ ဗျာ သိပ်ကောင်းတာပဲ .. .ပါရမီရှင်လို့ ဆို လိုက်ချင်ပါရဲ့ ဗျာ
ရန်ကုန်သား :D :D
ရယ်ရတာလည်း...မောလို့...။ မေဓာဝီမှာ သေပါပြီဆိုတော့ အော်ရယ်ပစ်လိုက်မိတယ်...။
ဟားဟား..... အူလိုက်ရတာ ရီတွေကိုတတ်နေတာပဲ... ဟတ်ပီနူးယီယား ကိုမြစ်ချိုးငင်းရေ........
နောက်လည်း မပျက်မကွက် အားပေးနေပါ့မယ်။
ဘာသူမှလည်း မပြစ်ယူမှာ မဟုတ်လို့ ရေးချင်သလိုသာ ရေးပါဗျာ.။ သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး နားလည်ကြပါတယ်။
ကိုမိုးမောင် ဆီကနေ blog link လေးရလို့ ဖတ်ကြည့်တာ တကယ့်ကို စာအရေးအသား ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့ ညက်ညက်ညောညော ရေးထားတာ ဖတ်ရလို့ တကယ့် အငြိမ့်ကနေတာ ကြည့်ရသလိုပါဘဲ။ ပွဲပြီးသွားမှာ စိုးသည့်အလား ဖတ်ရတာ ပြီးသွားမှာတောင် ဖတ်ရင်း စိုးရိမ်မိပါရဲ့။ link ထားပါရစေဗျာ။ အသစ်တင်တိုင်း ဖတ်ရအောင်လို့။
နှစ်သစ်ကူးမှာ ပျော်စရာလေးတွေနဲ့ စတင်တွေ့လိုက်ရလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ် ကိုမြစ်ကျိုးအင်းရေ... အရေးအသားကတော့ တကယ့် အနုပညာ ပါရမီ အပြည့်ပဲနော်။ တခါမှ ဇတ်ပွဲမကြည့်ဘူးတဲ့သူတောင် ဒီဇတ်လေးဖတ်ပြီး အရေးအသား အပြောအဆိုတွေ အလွတ်ရသွားတယ်။း)
ဘလောဂ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ဇတ်ပွဲလေး လာကြည့်ရင်း ပြုံးပျော်သွားပါတယ်။
ရောက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ... အငြိမ့်ပွဲကိုဖြင့် အိပ်ချင်မှုးတူးပါပဲဗျာ။ သူများတွေ ၀ါးခနဲ့ ပွဲကျနိုင်ကြပေမယ့် မသောက်ပဲမူးနေတော့ ပွဲမကျနိုင်တာပါ။ နောင်ပွဲများလဲ လာရောက် အားပေးပါအုံးမယ်ခင်ဗျာ
ပျော်ရွှင်ဖွယ် နှစ်သစ်လေး ဖြစ်ပါစေး))
နှစ်သစ်ကူး အငြိမ့်လေး ဖတ်သွားပါကြောင်း ... :D
နောက်ဆက်တွဲရော ကဦးမှာလား :D
ဖတ်ပြီးအိနြေ္ဒအပြည့်ဖြင့် ရီမောသွားသည်။ ညှင်းညှင်း။
မကြည့် ရတာာကာပြီ ဖြစ်တဲ့ဇာတ်ပွဲတစ်ခုကို ပွဲခင်းထဲ
ဝင်ထိုင်ပြီး မိုးအလင်း ကြည့် လိုက်ရသလိုပါပဲ။
ဇာတ်သမားတွေ ပြန်တော့ လဲ မှတ်သားစရာတွေ ကျန်ခဲ့ 
တော့ တာပါပဲ။ ဖတ်ရင်းနဲ့ လဲ ကျပ်တည်းနေတာတွေ
ပြေရော့ရပါတယ်။
ဘယ်လိုမှ ကျော်လွှားဖတ်လို့ မရအောင် .. လုပ်ရက်တယ်။ ရယ်ရတယ်လို့ မပြောတော့ပါဘူး ငိုမှ မငိုရတာ။ ဒီတော့ .. ရယ်ရတယ်ဗျာလို့ပဲ ထပ်ပြောချင်တယ်။ တော်သေးတယ်။ ကိုယ်မပါလို့ အဟိဟိ။
အော်... ရေးလဲရေးတတ်လွန်းတယ် ကိုမြစ်ကျိုးအင်းရယ် ..
ရယ်လိုက်ရတာ ... :)
သူငယ်ချင်း.. ငါအကြိုက်ဆုံးကတော့ ဘလော့ဂါနာမည်တွေနဲ့ ပြန်ပြောတဲ့ ပြက်လုံးပဲ။
သိပ်တော်တာဘဲ ဖတ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ ရီလိုက်ရတာ
အားပေးချီးကျူးသွားတဲ့လူတွေများလွန်းလို့ ဘာမှပြောစရာ မကျန်တော့သလိုဘဲ.. ရေးတတ်လွန်းလို့ တကယ်ကိုအားကျ ချီးကျူးမိပါရဲ့.. တကယ်ဘဲ အငြိမ့်ကနေသလားကို ထင်မိတယ်.. ရီရတာလဲ တကယ့်အငြိမ့်စင်ကို ကြည့်နေရလို မြင်ယောင်လာအောင် ရေးတတ်ပါပေရဲ့.. လေးစားပါတယ်ဇာတ်ဆရာ...
ပွဲလာငှားတာ.... ဇာတ်ဆရာက ဇာတ်ရုပ်ချတာ တော်လွန်းလို့ တကယ့် အငြိမ့်ကြည့်နေရသလို မျက်စိထဲမြင်တယ်..၊ နေ့လည်ကလာဖတ်တာ ၊ ခုမှ လာမန့်တာ၊ လင့်ခ်သွားပြီဗျို့....
တော်ပါပေတယ်... အရမ်းရီ ရတာပဲ....။
ဘလော့တနှစ်ပြည့် အငြိမ့်လေးနဲ့ နှစ်သစ်ကို ကြိုထားတယ်..စိတ်ကူးလေးတွေ ကောင်း၏
အမြဲ မဟောင်းတဲ့ ကောင်းကင်ပြာ
ပါးပါးရေ ၅၉ ဆိုတော့ မ ဂဏန်းကြီးမ မကောင်းလို့ စုံဖြစ်သွားအောင် ဆလူးလေး မန့်ပေးခဲ့ တယ်နော် ဟဲဟဲ
ဘာမန့်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ ကိုယ်ပြောချင်တာတွေက အောက်ဆုံးကဆိုတာ ပိသွားပြီ။
ညီတော်မောင် ဇတ်ဆရာကိုမျှစ်ချိုးအငြိမ့်ကတော့ ပွဲငှားမဲ့သူတွေတန်းစီနေပြီ
အင်း...ခုမှပဲ ဟောင်းလွန်းလှပြီဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သဘောပေါက်မိတယ်....အိုပြီကိုး..အဟား
နှစ်ကူးမှာ စင်ပေါ်ကဲမိပြီး ခုထိ အမူးမပြေသေးလို့ပါဗျို့။
နှစ်သစ်မှာ မင်္ဂလာ အဖြာဖြာနဲ့ ပြည့်စုံပါစေဗျားးးးးး ။ ။
အားလုံးပြောသွားကြတဲ့ အတိုင်း ထပ်တူ ခံစားမိပါတယ်။
ဒီဘလော့ဂ်လေး တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ခင်မင်ရတဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ ပိုပိုတိုးလို့ ရသစုံလင်တဲ့ ပို့စ်တွေလည်း ဆက်လက် ရေးသားနိုင်ပါစေ :)
ကိုမြစ်ကျိုးရေ နံပါတ် ၃ ကို ဖတ်ပြီးပြီလို့ ထင်နေတာ မဟုတ်ဘူးဗျ ... အခုမှ မန့်လိုက်ပါတယ် ... အရမ်းကောင်းတယ်ဗျ ... ဒီဇတ်လမ်းကို တကယ်ကကြ ရရင် ကောင်းမယ်ဗျာ
ပရိတ်သတ် ရဲ့ အားပေးမှုကတော့
အရေးအသားကတော့ လန်းနေတာပဲ ဆရာကျိုးရေ ..
ဆိတ် ၊ ဘဲ၊ ဝက် တို့ ရဲ့ ထိပ်တုံး မှာ အဖေ .. rap လေး ၊ ဘလောဂါ နာမယ် တွေ ရဲ့ ကာရံလေးတွေ မိုက်တယ် ..
နောက်ဆုံးတန်းကနေ ပေါ့ .. စိတ်မရှိ်ပါနဲ့ .. ခုမှ ရောက်တယ်
အားလုံး ပြောသွားကြလို့ ပြောစရာ မကျန်တော့ ပါဘူးဗျာ။ နောက်ထပ် အငြိမ့်တွေ မျှော်နေပါတယ်။ တကယ့် ပါရမီရှင် ဇာတ်ဆရာ ပါပဲဗျို့ ..
ကိုယ်ပိုင် ပျက်လုံးတွေ မို့သာပဲ
ကို မြစ်ကျိုး ရေ ...
တော်တော်ကို အသံမထွက်ဘဲ ရယ်မိတာ ...
LCD က တံတွေးစင်ပြီး တစ်ရှူး နဲ့ ပြန်ပြန်
သုတ်ယူရတဲ့ အထိ .... ကျေးဇူး ဗျို့ :)